Leson’ny Tsy Fahombiazana Tao Amin’ny MIT Nanampy Tamin’ny Fanomezana Ronono Vao Avy Noterena Ho an’ny Olona An-tapitrisany Tao India · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Aogositra 2016 5:29 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, 日本語, English
Sorin Grama, ankavia, mandraraka ronono ao anaty vata fampangatsiahana ao India. Sary: Promethean Power Systems
Ity lahatsoratra nosoratan'i Jason Margolis ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 23 Aogositra 2016. Navoaka eto indray noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Nanana hevitra tsara i Sorin Grama. Tahaka ny hevitra tena mampitolagaga. Tena tsara ilay izy, nanome azy ny iray tamin'ireo loka ambony indrindra ho an'ny fandraharahana ny Ivontoeran'ny Teknolojia ao Massachusetts (MIT) ao Etazonia: laharana faharoa tamin'ny fifaninanana momba ny Fandrahararahana fanao isan-taona 100K Entrepreneurship Competition.
Nanamboatra milina mampiasa ampahana fiara tranainy izay afaka manafana rano tsy mila herinaratra ny ekipan'i Grama. Mieritreritra ny zavatra azo atao any amin'ny faritra ambanivohitra any amin'ny tontolo an-dalam-pandrosoana: afaka manadio lamba miaraka amin'ny rano mafana ny olona, na afaka mandro fotsiny amin'ny rano mafana, ary tsy mila mampiasa herinaratra. Revolisionera, sa tsy izany?
Nitondra ny zava-baovao tao India i Grama, manantena setriny goavana. Raha tokony ho izany anefa, tahaka izao no azony: «Eny, tsara izany. Saingy tsy hamaha ny olantsika izany. “
Diso kajy izy. Tsy te hiresaka rano mafana ny Indiana tambanivohitra; te hiresaka ronono mangatsiaka izy ireo.
«Tranga mahazatra amin'ny teknolojia mitady olana hovahana izahay», hoy i Grama.
“Mpamokatra sy mpisotro ronono betsaka indrindra manerantany i India,” hoy izy nanazava. “Ary tsy maintsy nangonina amin'izao fotoana saropady izao izany rehetra izany, izay mitarika fahasimbana, [na] maharatsy kalitao ronono nipetraka nandritra ny ora maro ambany masoandro alohan'ny ahatongavany ao anaty vata fampangatsiahana na fitaovana fikarakara azy.”
Ka navelan'i Grama, izay lehibe tao Romania ary nifindra tao Etazonia tamin'izy 18 taona ny tetikasa fanafanàna rano amin'ny masoandro izay nahazo loka ary nifantoka tamin'ny ronono izy.
Nifindra tao India izy ary nahatsapa fa ny antony lehibe mahatonga ny fahasimban'ny ronono dia ny herinaratra tsy azo antoka.
“Ny zavatra tsara fantarina dia manana herinaratra avokoa ny ireo tanàna kely rehetra ireo, [saingy] tsy mahazo izany 24 ora isan'andro izy ireo.
Ao India, kely ny ankamaroan'ny fatran-dronono angonin'ny tantsaha miparitaka manerana ny firenena. Sary: Promethean Power Systems
Saingy nihevitra ity maintimolalin'ny MIT ity fa raha afaka mampiasa herinaratra izy rehefa mandeha izany ary afaka mitahiry angovo, dia afaka mihazona ny ronono hangatsiaka izany. Ny zava-tsarotra dia ny fanamboarana bateria tsara kokoa.
Tonga tamin'ny endrika bateria manangona hafanana, izay mamoaka ny herinaratra voatahiry tsikelikely ny vahaolany.
“Tahaka ny manao glasy (ranomandry) izany. Manao ‘glasy ‘isika. Ny dingana amin'ny fampangatsiahana ny fitaovana dia mitahiry angovo ary raha mitsonika izany fitaovana izany, dia mamoaka angovo “.
Nandeha izany. Ary nahalafo fitaovana indostrialy fampangatsiahana ronono fanodina maherin'ny 300 tao India ny orinasan'i Grama, Promethean Power Systems. Midika izany fa ronono amin'ny litatra an-tapitrisany no tsy ho verivery foana intsony. Mandritra izany, vitsy ny olona harary, ary tsy very volabe intsony ny tantsaha madinika eny ambanivohitra.
Tena talanjona tamin'i Grama – ny fahombiazana sy ny tsy fahombiazan'ny orinasany ny Sekoly momba ny Fitantanana MIT Sloan – ka nitondra azy mba hampianatra amin'ny seminera fararano izy ireo. Izy no ho mpandraharaha voalohany indrindra ao an-tsekoly izay nifantoka manokana any amin'ny firenena an-dalam-pandrosoana.
“Maro ireo mpandraharaha tsy mahomby amin'ny voalohany, amin'ny faharoa sy fahatelo mihitsy aza, ary zava-dehibe ny manana olona mahitsy fo amin'ny mpianatra», hoy i Georgina Campbell Flatter, tale mpanatanteraka ao amin'ny Foibe Fanampiana Ara-Pampianarana amin'ny Fampandrosoana sy ny Fandraharahana ao amin'ny MIT.
Manamafy ny foibe fa ilaina ny famoronanana rehefa ampiasaina. Mandrisika ny mpianatra izy ireo mba hivoaka ny laboratoara ary hiditra amin'ny tontolo an-dalampandrosoana mba hiady amin'ny olana tena izy.
Manome ohatra anankiroa i Flatter : «Ahoana ny fomba iheverako ny fanamby amin'ny fanafarana/fanondranana fitaovana ara-pitsaboana avy ao Boston mankao Lagos? Ahoana no fomba hizarako ny tombontsoa amin'ny mpanakanto izay monina any ambanivohitr'i India raha toa ka tsy manana kaonty amin'ny banky izy ireo? “
Iray amin'ireo tanora mpandraharaha mitolona amin'ny olana tahaka izany ilay nahazo diplaoma vao haingana tao amin'ny MIT, Cyril Masud Khamsi. Mitoby ao amin'ny sehatr'asa nozaraina ao amin'ny faritry ny oniversite, ao amin'ny Foiben'ny Fandraharahana MIT, Martin Trust izy ankehitriny, manokatra orinasa hanatsarana ny servisy kamiao ao Rwanda.
«Zatra niasa tao Rwanda aho, ary niara-niasa tamin'ny mpamboly, nanana tolona lehibe tamin'ny fiarovana ny fitaterana izay nianteheran'izy ireo izahay ary tsy naka ampahany betsaka tamin'ny fidiram-bolan'zy ireo izany», hoy i Khamsi.
Manasokajy ny orinasany ho toy ny Uber ho an'ny kamiao ara-barotra ao Afrika izy. Nahazo tari-dalana saika isan'andro avy amin'i Grama izy.
Nilaza i Khamsi hoe: “Ity programa ity dia miezaka manosika antsika hatoky fa tsy vao nivoaka isika ary hijery zavatra matetika amin'ny fomba tsotra dia tsotra na hanambony tena : ‘Manana olana ireo olona ireo, mampalahelo izy ireo. Fantatro fa manana fahalalana ilaina amin'izany indrindra aho, avelao aho hamaha izany ho azy ireo’. tsy nieritreritra izany ho mahomby aho”.
Mpianatra miasa ao amin'ny sehatr'asa ifampizarana, Foibe ho an'ny Fandraharahana MIT Martin Trust. Cyril Masud Khamsi, eo ankavanana. Sary: Jason Margolis
Eny tokoa, misy ihany koa ny filôzôfia Steve Jobs. Malaza ny filazan’ny mpiara-manorina ny Apple hoe “Imbetsaka ny olona no tsy mahafantatra izay tadiaviny mandra-panehoanao izany ho azy ireo.”
“Tena hevitra tsara izany”, hoy i Grama. “Saingy mino aho fa vitsy amintsika no mitovy amin'i Steve Jobs.”
Azo antoka, mety manam-bintana ny mpamorona hoy i Grama. Saingy fantany voalohany fa tsara kokoa ny mahafantatra ny tsena alohan'ny hamoronana vokatra.
Indiana an-tapitrisany mankafy ronono toy ny vao avy noterena no tena faly fa tonga tamin'izao zavatra izao i Grama.